बेश्यालयमा आएका ग्राहकले युवतीलाई अनौठो प्रस्ताब् , हेर्नुहोस् तपाईं छक्क पर्नुहुनेछ (पुरा हेर्नुस) - Valley Khabar
Homeमनोरन्जनबेश्यालयमा आएका ग्राहकले युवतीलाई अनौठो प्रस्ताब् , हेर्नुहोस् तपाईं छक्क पर्नुहुनेछ (पुरा हेर्नुस)
यौनकर्मी महिलाहरु दैनिक रुपमा नयाँ नयाँ खतराको सामना गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरुलाई कस्ता कस्ता खतरा आइपर्दछन् त ? यसको अनुमान लगाउन पनि गाह्रो पर्छ । वेश्यालयमा कस्ता कस्ता ग्राहक आउँछन् र उनीहरुका माग कस्ता हुन्छन् ? पढौँ कE0 सेक्स गर्नुको साटो महिलालाई एउटा गिलासमा पिसाब फेर्न लगाउँदो रहेछ र त%5रायः आउने गर्दाे रहेछ । उसले यौनकर्मी महिलासँग सेक्स गर्नुको साटो महिलालाई एउटा गिलासमा पिसाब फेर्न लगाउँदो रहेछ र त्यसबापत झण्डै २० हजार रुपैयाँ बराबरको रकम दिँदो रहेछ ।
– त्यस्तै एक वेश्यालयमा काम गर्ने महिला यौनकर्मीहरुले एकजना यस्तो ग्राहक फेला पारे । उसले एकसाथ ७ जना यौनकर्मी महिलालाई कोठामा राख्दोरहेछ । सातै जनालाई निर्वस्त्र गराएर उनीहरुलाई भित्तातर्फ फर्किएर उभिन लगाउँदो रहेछ । अनि उनीहरुलाई हेर्दै आफुले हस्तमैथुन गर्दोरहेछ । उसले महिलाहरुमाथि हातसम्म पनि लगाउँदो रहेनछ र यसो गरेबापत उसले सातवटै यौनकर्मी महिलाको पूरा शुल्क भुक्तान गर्दोरहेछ ।
– एकजना महिला यौनकर्मीका अनुसार एकजना यस्तो ग्राहक उनीसँग आयो जसले सेक्स होइन की नक्कली बन्दुकले लडाइँ गर्ने प्रस्त5दथ्यो ।
– एक यौनकर्मीका अनुसार उनी एकपटक एकजना अनौठो ग्राहकको फेला परपर्दथ्यो । त्यसक्रममा उसले तथानाम गाली पनि गर्दथ्यो ।
– एक यौनकर्मीका अनुसार उनी एकपटक एकजना अनौठो ग्राहकको फेला परिन् जसले सेक्स होइन की सँगै बसेर अनौठा खालका आँखिभौँको चित्र बनाउँथ्यो र त्यसक्रममा पागल जस्तै गरी हाँसिरहन्थ्यो ।
(एकजना ग्राहक यस्तो पनि रहेछ की उसले यौनकर्मी महिलालाई आफ्नो आमा बन्न आग्रह गर्यो । यौनक्रिडा गर्ने कोठामा एकछिन उसको लागि आमाको अभिनय गरिदिनुपर्ने । अनि ऊ बच्चाजस्तै गरी कोठामा उफ्रिने र रोइकराई गर्ने गर्दथ्यो ।(कतिपय ग्राहक यस्ता अनौठो पनि हुन्छन् की यौनकर्मी महिलाको निर्वस्त्र सरीरमा खानेकुरा राखेर खान पाउनुपर्ने माग गर्दछन् । त्यस्तै एकजना ग्राहकले एक यौनकर्मी महिलाको निर्वस्त्र सरीरभरी चिल्ली सस लगाइदिएको घटना बाहिर आएको थियो ।
बोडे काण्ड : ९ दिनपछी खुल्यो यती ठुलो रहस्य । बाबू आमा सहित जेठी श्रीमतीलाई रामधुलाइ | मार्ने धम्की